फागुन महिनामा भगवान् शिवप्रति श्रद्धा प्रकट गर्दै महाशिवरात्रि पर्व मनाइन्छ । यस पर्वमा भगवान् शिवसँग आबद्ध एउटा वनस्पतिको पनि खुबै चर्चा चल्ने गर्छ । त्यो वनस्पतिको नाम हो- धतुरो । शिव आराधनामा धतुरोलाई अपरिहार्य मानिन्छ । धेरैले धतुरोलाई नशालु वनस्पतिका रूपमा मात्र बुझेको पाइन्छ । त्यही भएर भगवान् शिव र धतुरोको सम्बन्धलाई लिएर निक्कै टीका-टिप्पणी हुने गर्दछ तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने धतुरो एउटा अति गुणकारी औषधि पनि हो ।
धतुरोको उपयोगितासँग परिचित भएकाले ने प्राचीन विद्वान्ले शिव र धतुरोको सम्बन्ध लुकाउने कुनै प्रयास गरेनन् बरु धतुरोको नाम नै शिवपि्रय भनेर राखिदिए । संस्कृतमा धतुरोलाई शिवशेखर भन्ने अर्को नाम पनि दिइएको छ । शैव भूमिको नामले प्रसिद्धि पाएको नेपालमा तराईदेखि पाँच हजार फिटको उचाइसम्म धतुरो पाइन्छ । नेपालको राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेदमा धतुरोबाट औषधि बनाउने ज्ञान प्रचुर मात्रामा रहेको छ ।
भगवान् शिवलाई विष विज्ञानका प्रणेताको रूपमा पनि सम्मान गरिन्छ । प्राचीन विष विज्ञान- 'अगदतन्त्र'मा धतुरोलाई उपविष भनिएको छ । विष जत्तिकै खतरनाक नभए पनि विष जस्तै काम गर्ने क्षमता भएकाले धतुरोलाई उपविष भनिएको हो । आयुर्वेदमा धतुरोलाई शुद्ध गरी गुणकारी औषधिमा परिणत गरिन्छ । सुतशेखर रस, धतुराक्षार, कनक आसव, त्रिभुक्नकीर्ति रस, प्रलापान्तक रस, कनकसुन्दर रस, उन्माद गजाङकुश रस र ग्रन्धिशोध निवारिका वर्तिकाजस्ता आयुर्वेदिक औषधि धतुरोबाटै तयार पारिन्छ ।
प्राकृतिक रूपमा धतुरोको बीऊ विषालु हुन्छ । यसको बीऊ खाएको आधा घण्टापछि शरीरमा नकारात्मक लक्षण उत्पन्न हुनथाल्छ । जस्तो कि शरीर तात्ने अनि मानिस बोल्नै नसक्ने हुन्छ । आँखा, मुख सबै रातो हुनथाल्छ र एउटै सामानलाई पनि दुईवटा देख्दछ । बरबराउने, कपडा लुछ्ने, उप|mने, दौड्नेसम्मका पागलपन सवार हुनथाल्छ । यदि चौबीस घण्टाभित्र उपचार गरिएन भने त यसले मान्छेलाई मृत्युको मुखमा नै पुर्‍याइदिन्छ । धतुरोको यस्तो दुष्प्रभाव तब उत्पन्न हुन्छ जब यसको सयभन्दा बढी बीऊ सेवन गरिएको होस् । अर्थात् सयभन्दा अधिक बीऊको सेवन धतुरोको घातक मात्रा हो ।
बाबियाचौर -म्याग्दी), ४ चैत/ प्राविधिक ज्ञान र उपकरणको अभावका साथै सम्बन्धित पक्षको बेवास्ताका कारण म्याग्दीका भीर पहराहरूमा पाइने आयुर्वेदिक औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बहुमूल्य सिलाजित उत्खनन् हुनसकेका छैन । सिलाजित उत्खनन् गरी उपभोग गर्नेतर्फसम्बन्धित पक्षको ध्यान नपुगेपछि बर्षेनि करोडको नोक्सानी भइरहेको छ । म्याग्दीका बाबियाचौर, ज्याम्रूककोट, भकिम्ली, कुइनेमङ्गले, मुदी, मुना, ताकम, मराङ, विमलगायत गाविसका पहरामा सिलाजित पाइन्छ । सिलाजित उत्खनन् गर्नतर्फसम्बन्धित पक्षले चासो नदेखाउँदा स्थानीयवासी निरास भएको ज्याम्रूककोटका शिवराम शर्मा बताउनुहुन्छ । नुनिलो र टर्र्रो स्वाद हुने सिलाजित भीर पहरामा मात्र पाइन्छ । सिलाजित कालो र सेतो गरी दुइ किसिमका हुन्छन् । पहराबाट निस्किएको एक प्रकारको रसायन जमेर सिलाजित बन्ने गरेको बताइन्छ ।
कालो सिलाजित को रस नियमित सेवन गर्नाले घातु, गानो गोला, ग्यास्टि्रक, नसासम्बन्धीलगायत रोग निको हुने जनविश्वास रहेको छ । सिलाजितको नियमित प्रयोग गर्नाले स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदा हुने जिल्ला आयुर्वेदिक अधिकृत डा. रामचन्द्र ढकालको भनाइ छ । बजारमा माग भए पनि उत्खनन् गर्ने आधुनिक सीप र प्रविधिको अभावमा सिलाजित खेर गइरहेको बाबियाचौरका फडिण्द्रप्रसाद रिजालले बताउनुभयो । करिब तीन दशकदेखि स्थानीय जडीबुटीको प्रसोधन गरी आयुर्वेदिक औषधि बनाउँदै आएका रिजाल पहराबाट सिलाजित निकाल्दा निकै जोखिम मोल्नुपर्ने भएकाले आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता रहेको बताउनुहुन्छ । बजारमा प्रति दस ग्राम सिलाजित रु.२५ देखि रु.३० सम्ममा बिक्री हुन्छ । गत वर्षचार क्विन्टल सिलाजित निर्यात भएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिकिलोग्राम सिलाजितबाट रु.५० राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ । जडीबुटीको असन्तुलित व्यापारका कारण लगानीकर्ताहरू यसतर्फआकषिर्त हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला वन अधिकृत विजयराज सुवेदीका अनुसार जिल्लाबाट न्यून मात्रामा मात्र बहुमूल्य सिलाजित निर्यात हुने गरेको छ ।
वैद्यखानामा आयुर्वेदिक सङ्ग्रहालय
काठमाडौं, २६ कात्तिक : सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले ३६२ वर्षभन्दा पुराना आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई जीवन्त राख्न वैद्यखानामा आयुर्वेद सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको क्रमिक विकास कसरी भयो भन्ने तथ्यलाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यले वैद्यखानामा आयुर्वेद सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न लागिएको हो ।
समितिका प्रबन्ध निर्देशक डा.माधवप्रसाद लम्सालले आयुर्वेद नेपालको राष्ट्रिय चिकित्सा पद्धति भन्ने गरेको भए तापनि त्यसप्रकारको जनमानसमा अनुभूति हुन नसकेको बताउनुभयो । लामो इतिहास बोकेको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई जीवन्त दिन आवश्यक भएको बताउँदै निर्देशक डा. लम्सालले प्रताप मल्लको पालादेखिको ऐतिहासिक पद्दतिलाई विश्वसामु परिचित गराउन पनि आयुर्वेद सङ्ग्रहालयको आवश्यक छ । उहाँले आयुर्वेद सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
सदीयौंदेखि शास्त्रीय ढङ्गबाट गुणस्तरयुक्त र बहुउपयोगी आयुर्वेद औषधि निर्माण गर्दै आएको यस वैद्यखानाले हाल १६० प्रकारका औषधि निर्माण गरी बजारमा विक्री गर्छ ।
समितिका निर्देशक डा. लम्सालले ०६४।०६५ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सामग्रीहरूको मूल्य खुलाई वैद्य स्टोर मेनेजमेन्टको प्रारम्भिक प्रक्रिया थालिएको बताउनुभयो । उहाँले वैद्यखाना विकास समितिको सम्पत्ति विवरणका बारेमा भन्नुभयो, 'जिन्सी र नगद गरी वैद्य खानाको सम्पत्ति २८ करोड २३ लाख ६२ हजार ४४७ छ । जसअनुसार जिन्सीमा २६ करोड ५५ लाख ६५ हजार ९२७, प्याकिङ सामग्रीतर्फ ४१ लाख १८ हजार ९१८ र कच्चा पदार्थतर्फ एक करोड २६ लाख ७७ हजार ६०२ रहेको छ ।
सबभन्दा बढी गत आर्थिक वर्ष २०६४।०६५ मा तीन करोड ९१ लाख ५६ हजारभन्दा बढी औषधि वैद्यखानाले विक्री गर्न सफल भएको जानकारी पनि निर्देशक डा. लम्सालले दिनुभयो । आयुर्वेद क्षेत्रमा एउटै नारा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारीस्तरबाट बन्दै गरेको निजामती अस्पतालमा आयुर्वेद शाखा खोल्नुपर्छ भन्नुभयो । निर्देशक डा. लम्सालले एउटै छातामुनि आयुर्वेद र आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
आयुर्वेद चिकित्सालाई सम्पन्न र ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न औषधिका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ वैद्यखानाले सोझै समुदायसँग सम्पर्क गर्न पाउनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले कृषक तथा वन उपभोक्ता समितिहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो परेको र ठेकेदारी प्रणालीका कारण जडीबुटी उत्पादन र
सङ्कलन गर्ने किसानलाई कम गर्न पनि वैद्यखानाले प्रत्यक्ष कृषकहरू कहाँ गएर कच्चा पदार्थ सङ्कलन गर्न पाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
विभिन्न ब्रान्ड र नारामा सडकको चोकचोकमा विक्री भइरहेको आयुर्वेदिक औषधिप्रति निर्देशक डा. लम्सालले आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले त्यसका बारेमा नियमन गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन क्षमता यस आर्थिक वर्षमा वृद्धि गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, 'यसवर्ष हामी उत्पादनमा फड्को मार्नेछौं । ग्रामीण समुदायसँग जडीबुटी लिने प्रक्रियामा छौं ।’
काठमाडौँमा स्थापना हुने आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रको परियोजना डिजाइनका लागि नेपाल र चीनबीचमा हस्ताक्षर भएको छ
- 18 अगस्त 2008
चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुने आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रको परियोजना डिजाइनका लागि आज बिहान नेपालपक्ष र चिनियाँ पक्षबीचमा हस्ताक्षर भएको छ । आयुर्वेद विभागको कार्यालय टेकुमा भएको हस्ताक्षरमा नेपालका तफबाट आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा. ठाकुरराज अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यसैगरी चिनियाँ पक्षको तफबाट चिनियाँ दूताबासको इकोनोमी काउन्सिलरका प्रथम सचिव काङ्ग चुनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
आज हस्ताक्षरित सम्झौतापत्रमा उल्लेख भए अनुसार परियोजना डिजाइन आउँदो डिसेम्बर महिनाको दोस्रो हस्ताबाट सुरु हुनेछ । काठमाडौँको कीर्तिपुरको 35 रोपनी क्षेत्रफलमा आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रको निर्माण हुनेछ । परियोजनामा पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी चिनियाँ सहयोगबाट प्राप्त हुनेछ ।
परियोजनाका सम्पर्क अधिकारी डा. हरिश्चन्द्र शाहले सि.आर.आई.लाई बताउनु भए अनुसार परियोजना कार्य प्रारम्भ भएको बीस महिनाभित्रमा निर्माण पूरा हुनेछ । परियोजना क्षेत्रभित्र आयुर्वेदिक अनुसन्धान तथा अध्ययनका लागि अत्याधुनिक प्रयोगशाला पनि बनाइनेछ । यसका साथै आयुर्वेद उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र, विश्वविद्यालय स्तरको अध्ययन अध्ययापन तथा उपचार पद्धत्तिसमेत परियोजना स्थलमा स्थापना गरिनेछ ।
परम्परागत चिनियाँ उपचार पद्धत्तिविश्वमै प्रख्यात मानिएको छ । परम्परागत चिनियाँ उपचार पद्धत्तिमा आयुर्वेदलाई उच्च प्राथमिकता दिइन्छ जसले गर्दा उपचार पद्धत्तिअपनाउँदा कुनै पनि प्रत्युत्पादक असर देखिँदैन । नेपालमा पनि आयुर्वेद उपचार पद्धत्तिपरम्परादेखि नै प्रचलनमा आएको भए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्ने तथा जटिबुटीको व्यापक प्रयोग गर्न सकिएको छैन । अब चिनियाँ सहयोगबाट निर्माण हुने यस परियोजनाबाट भने नेपाली आयुर्वेद उचार पद्धत्तिले पनि नयाँ काँचुली फेर्न आशा गरिएको छ ।
The ‘Ayurveda industry’ in ...
Interview with Ayurvedic Ph ...
सहरी किशोर-किशोरीहरुमा यार् ...
बहुमूल्य सिलाजित उत्खनन् हु ...
वैद्यखानामा आयुर्वेदिक सङ्ग ...
दिगो स्वास्थ्यको आधारः आयुर ...
काठमाडौँमा स्थापना हुने आयु ...
Situation of Ayurveda in Ne ...
Nepal Ayurveda Medical Stud ...